May 2021 - Page 45 of 79 - Achawlaymyar
ဆန်တို့_ဆားတို့ လုံးဝမပါသော မိုင်းဖုန်းဆရာတော်၏ မေတ္တာစာပါ သူတော်ကောင်းတို့
May 14, 2021 by Achawlaymyar
ဆန်တို့_ဆားတို့ လုံးဝမပါသော မိုင်းဖုန်းဆရာတော်၏ မေတ္တာစာပါ သူတော်ကောင်းတို့ သာသနာတော်နှစ် ၂၅၆၄ သီတင်းကျွတ်လပြည့် (ယွန်းဂိုဏ်ပြက္ခဒိန်)၊ တော်သလင်းလပြည့် (မြန်မာပြက္ခဒိန်) (၁၊ ၁၀၊ ၂၀၂၀) အရညဝါဒီ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်၏ တပည့်ဒကာများအား သိရှိရန် ပေးပို့သော မေတ္တာစာ မိုင်းကျက်ဂူမှာ ဆရာတော်အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ကာ ချမ်းမြေ့စွာဖြင့် တရားဘာဝနာ အားထုတ်လျက်ပါ။ တောတောင်သဘာဝနဲ့အတူ အေးချမ်းလှပါတယ်။ တောကြက်၊ ဂျီ၊ မျောက်၊ ကျားသစ်လေး၊ တောကြောင် စတဲ့ သားငှက်တိရစ္ဆာန်တွေ ဂူမှာ လာရောက်ကျက်စားပါတယ်။ ညနေပိုင်း ဥဒေါင်းတွန်သံတွေ ညံနေသလို မြွေလည်း ဂူထဲမှာ လာအိပ်ပါတယ်။ ဆရာတော်လည်း သူတို့တတွေကို ရင်ဝယ်သားလို မေတ္တာထားပါတယ်။ ဂူရှေ့မှာလည်း ငှက်ကလေးတွေ ကျီးတွေကို အစာကြွေးပါတယ်။ သတ္တဝါတိုင်း ဝမ်းရေးအတွက် ရှာစားနေကြရတာ အားလုံး အတူတူပါပဲ။ … Read more
ခိုင်ထူးရဲ့ “စစ်ကိုင်းလမ်း” သီချင်းထဲက စစ်ကိုင်းလမ်းနေရာ​လေးဆိုတာ…
ခိုင်ထူးရဲ့ “စစ်ကိုင်းလမ်း” သီချင်းထဲက စစ်ကိုင်းလမ်းနေရာပါ ! စစ်ကိုင်းတံတားနဲ့ဆက်ထားတဲ့ မန္တလေးဘက်ခြမ်းလမ်းနေရာဖြစ်ပြီး ဘေးမှာ သပြေတန်းခံတပ်ရှိပါတယ် (စစ်ကိုင်းလမ်းသီချင်းရေးခဲ့တဲ့ တေးရေးကိုနေဝင်းရဲ့ အတည်ပြုချက်ရယူပြီး ဖြစ်ပါတယ်) စစ်ကိုင်းတံတားအနီး ဥယျာဉ်လေးရွာမှာ postingတာဝန်ကျတဲ့ ချစ်သူ ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ခံစားရေးဖွဲ့ထားတဲ့ လက်ရာလ်ု့လည်း သိရပါတယ် * * တိုးထွက်မယ့် မနက်နေရောင် ဖြာထွန်းရင်. . . . စစ်ကိုင်းလမ်းက စောင့်နေမယ် ” ” ” အသည်းရင် လှိုင်းခတ်သံအတူဆုံရင် အပြုံးတွေ နှုတ်ဆက်မယ်လေ ” ​တစ်ချိန်မှာ ကောင်မလေးကထားခဲ့လို့အသည်းကွဲကျန်ရစ်ဖြစ်ပြီး မောင့်လပြည့်ဝန်းဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့တယ် ! ခိုင်ထူးအတွက် စစ်ကိုင်းလမ်း နဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်အတွက် မောင့်လပြည့်ဝန်း နှစ်ပူဒ်လူံးက ဒီနေ့အထိ အောင်မြင်နေတုန်း ဂန္တဝင်သီချင်းတွေ ဖြစ်နေဆဲပါပဲ … Read more
မန္တလေးမြို့က နာမည်ကျော် မြို့မတူရိယာအသင်းဟာ စစ်ကောင်စီရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့ စစ်တပ်အတွင်းက ခန်းမတခုဖွင့်ပွဲအတွက် ဖျော်ဖြေဖို့ လက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ လုံခြုံရေးအရ အမည်မဖော်လိုတဲ့ မြို့မအသင်းနဲ့ နီးစပ်သူတဦးက RFA ကို အတည်ပြုချက်ပေးပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ ၃၈လမ်းနဲ့ ၇၈လမ်းထောင့်မှာရှိတဲ့ မျက်ပါးရပ် စစ်တပ်ဝင်းအတွင်း ရတနာပုံခန်းမ ဖွင့်ပွဲကို အခုရက်ပိုင်းမှာ ကျင်းပဖို့ရှိပြီး အဲဒီဖွင့်ပွဲမှာ မြို့မတူရိယာကို ဖျော်ဖြေပေးဖို့ မန္တလေးတိုင်း စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်ကိုက မြို့မအသင်းဥက္ကဋ္ဌကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီး ဖိအားပေးသလို မဖျော်ဖြေရင် မြို့မအသင်းကို အရေးယူမယ်ဆိုပြီး မန္တလေးတိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြံပေး ဦးကျော်ဝင်းကလည်း ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုအကြပ်ကိုင် ခြိမ်းခြောက်ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့် မြို့မအသင်းခေါင်းဆောင်တွေက ဖျော်ဖြေပေးဖို့ လက်ခံလိုက်ပေမယ့် မြို့မအသင်းဝင် တော်တော်များများကတော့ လက်မခံဘဲ ကန့်ကွက်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို အသေးစိတ်သိနိုင်ဖို့ မြို့မအသင်းခေါင်းဆောင်တွေဆီကို … Read more
အြန္လိုင္းမွာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ မခမ္းနားေပမယ့္ ဆန္းျပားလြန္းေနတဲ့ ေတာတြင္းတစ္ေနရာက KIA လက္ထပ္ပြဲ..
ေတာထဲမွာ လက္ထပ္ခဲ့ၾကတဲ့ KIA လက္ထပ္ပြဲ အခုလို အေျခမ်ိဳးဆိုေတာ့ ပိုၿပီးအားက်မိပါတယ္ အိုေအာင္ မင္းေအာင္ေပါင္းသင္း နိုင္ၾကပါေစ ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ည္းေပးပါေစ။ ေတာထဲမွာ လက္ထပ္ခဲ့ၾကတဲ့ KIA လက္ထပ္ပြဲ အခုလို အေျခမ်ိဳးဆိုေတာ့ ပိုၿပီးအားက်မိပါတယ္။ အိုေအာင္ မင္းေအာင္ေပါင္းသင္း နိုင္ၾကပါေစ။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ည္းေပးပါေစ ေတာထဲမွာ လက္ထပ္ခဲ့ၾကတဲ့ KIA လက္ထပ္ပြဲ အခုလို အေျခမ်ိဳးဆိုေတာ့ ပိုၿပီးအားက်မိပါတယ္။ အိုေအာင္ မင္းေအာင္ေပါင္းသင္း နိုင္ၾကပါေစ။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ည္းေပးပါေစ။ Photo > Credit —————————– တောထဲမှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ KIA လက်ထပ်ပွဲ အခုလို အခြေမျိုးဆိုတော့ ပိုပြီးအားကျမိပါတယ် အိုအောင် မင်းအောင်ပေါင်းသင်း နိုင်ကြပါစေ။ ဘုရားသခင် ကောင်းချည်းပေးပါစေ။ တောထဲမှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ KIA … Read more
သင့္ရဲ႕ ဘီယာဗိုက္ကိုေပ်ာက္ခ်င္ရင္မျဖစ္မေနလိုက္နာရမယ့္အခ်က္ ( ၄ ) ခ်က္…
ကြၽန္ုပ္တို႔ရဲ႕ကိုယ္ကေဖ်ာက္ဖို႔ခက္တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြထဲကတခုေပါ။ဒါေပမယ့္သင္ကနည္းလမ္းမွန္မွန္လုပ္မယ္ဆိုျမနိျမန္အဆင္ေျပမယ့္ေလ့က်င့္ခန္းေတြလဲရွိပာတယ္။ Bright Sideကသင္ဗိုက္ကအပိုေတြနည္းနည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ေပ်ာက္ခ်င္ရင္လုပ္ရမယ့္အေျခခံအဆင့္ေတြ ကိုေျပျပမွာပာ။့ အဆင့္ ၁.အစားအေသာက္ကိုျပန္စဥ္းစားပါ သင့္အစားအစာမွာသၾကားနဲ႔ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္ပမာဏေလ်ာ့ဖိ့ႀကိဳးစားပါ။ဆိုဒါကိုလက္ဖက္ရည္နဲ႔အစားထိုးပါ။အခ်ိဳကို အခြံမာသီး အသီးေတြနဲ႔သၾကားကိုပ်ားရည္နဲ႔အစားထိုးပါ။ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္နဲ႔အမွ်င္ဓာတ္ေတြပိုစားပါ။ အဆင့္ ၂. ဝိတ္ပိုေတြခ်ပါ။ တေန႔ကိုမိနစ္၃၀ေျပးပါကပုံပန္းပိုေကာင္းလာတာေတြ႕ရမွာပါ။အစမွာနာရီဝက္ေျပးဖို႔ခက္ခဲေနရင္လမ္းေလွ်ာက္ပါ။ေျပးျခင္းကလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းထက္ကယ္လိုရီႏွစ္ဒသမငါးဆပိုေလာင္ကြၽမ္းပါတယ္ တပတ္ကိုႏွစ္ႀကိမ္၃ႀကိမ္ခန႔္နာရီဝက္ေလာက္ေရကူးပါ။သင္ႀကိဳက္တဲ့ပုံမ်ိဳးေ႐ြးပါ။ေရထဲကလႈပ္ရွားမႈတိုင္းကသင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို က်ေစလို႔လႈပ္ရွားေနဖို႔ကအဓိကပါပဲ။၁နာရီေလာက္ျပင္းထန္စြာေရကူးျခင္းက၅၀၀ကယ္လိုရီေလာက္ေလာင္ကြမ္းေစပါတယ္။ သင္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်င္ရင္ေတာ့စက္ဘီးစီးျခင္းကအေျခခံပါပဲ။သက္ေတာင့္သက္သာပုံနဲ႔တပတ္မွာ ၂ႀကိမ္၃ႀကိမ္လုပ္ပါ။ အဆင့္ ၃. သင့္ဗိုက္သားကိုသန္စြမ္းေအာင္လုပ္ပါ။ ႊလုံးနဲ႔ေဆိုင္တဲ့လ့က်င့္ခန္းကသင္ဝိတ္က်ေအာင္ကူညီေပမယ့္ဝမ္းဗိုက္ကိုေတာ့မေလ်ာ့ေစပါဘူး။သင့္ႂကြက္သားေတြသန္စြမ္းၿပီးအေလးခ်ိန္လဲက်ဖို႔သင္ႏွစ္ခုလုံးႀကိဳးစားရပါမယ္။ ‌Vacuumကလဲေကာင္းတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းပါပဲ။၎ကိုလုပ္ဖို႔သင့္အဆုတ္ထဲကေလေတြအားလုံးကိုရႈထုတ္ၿပီးဝမ္းဗိုက္ကိုေက်ာ႐ိုးဆီဆြဲ၍၁၅စကၠန႔္ကေန၂၀စကၠန႔္ေလာက္ထိအသက္ေအာင့္ထားပါ။ထိုကဲ့သို႔၁၀ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ၿပီးတရက္ကို ၃ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ပါ။ရက္အနည္းငယ္ၾကာရင္သင့္ခါးေလးသြယ္လာတာကိုသတိထားမိမွာပါ။ ရိိုးုးရွင္းေပမယ့္အရမ္းအက်ိဳးရွိတာေပါ့။တရက္ကိုစကၠန႔္၃၀ေလာက္၂ႀကိမ္၃ႀကိမ္ခန႔္လုပ္ၿပီးျဖည္းျဖည္းခ်င္းၾကာခ်ိန္တိုးပါ။ကယ္လိုရီေတြတိုးတဲ့အျပင္ဝမ္းဗိုက္ေတြသန္မာေစပါတယ္။၎ကကိုယ္ေနဟန္ကိုပိုေကာင္းေစပါတယ္။ အဆင့္ ၄. ႂကြက္သားေျဖေလွ်ာ့ပါ။ ကြၽတ္ကြၽတ္ဝါးျခင္း.ဒီေလ့က်င့္ခန္းေတြကသင့္ဝမ္းဗိုက္နဲ႔အလယ္ပိုင္းကိုသန္မာေစပါတယ္။အလယ္ပိုင္းႂကြက္သားေတြဆန႔္လိုက္တာကတျခားႂကြက္သားေတြကိုဖိအားေလ်ာ့ေစမွာပါ။သင့္ဝမ္းဗိုက္ကိုပိုတိုးေစဖို႔ဒီနည္းကိုႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ေျခေထာက္မျခင္း.ပက္လက္လွန္ၿပီးသင့္လက္ေတြကိုၾကမ္းေပၚမွာဟန္ခ်က္ညီေအာင္ထားပါ။၁၀ႀကိမ္၁၅ႀကိမ္ေလာက္ေျခေထာက္ကိုျဖည္းျဖည္းမပါ။တလအတြင္းမွာထူးျခားမႈကိုေတြ႕မွာပါ။အပိုေဆာင္း… ေလ့က်င့္ခန္းတခုၿပီးရင္ေရေအးနဲ႔ေရခ်ိဳးပါ။အပူခ်ိန္ေလ်ာ့ျခင္းကႂကြက္သားနာက်င္မႈျဖစ္ေစတဲ့လက္တစ္အက္ဆစ္ပမာဏေလ်ာ့ေစတဲ့အျပင္ကိုယ္ကိုေႏြးေစဖို႔ထပ္တိုးကယ္လိုရီေတြလဲေလာင္ကြၽမ္းေစပါတယ္။ Writer –Min Thu (Daily Hot News ) Unicode ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ကဖျောက်ဖို့ခက်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေထဲကတခုပေါ။ဒါပေမယ့်သင်ကနည်းလမ်းမှန်မှန်လုပ်မယ်ဆိုမြနိမြန်အဆင်ပြေမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလဲရှိပာတယ်။ Bright Sideကသင်ဗိုက်ကအပိုတွေနည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပျောက်ချင်ရင်လုပ်ရမယ့်အခြေခံအဆင့်တွေကိုပြေပြမှာပာ။့ အဆင့် ၁.အစားအသောက်ကိုပြန်စဉ်းစားပါ သင့်အစားအစာမှာသကြားနဲ့ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏလျော့ဖိ့ကြိုးစားပါ။ဆိုဒါကိုလက်ဖက်ရည်နဲ့အစားထိုးပါ။အချိုကို အခွံမာသီး အသီးတွေနဲ့သကြားကိုပျားရည်နဲ့အစားထိုးပါ။ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အမျှင်ဓာတ်တွေပိုစားပါ။ အဆင့် ၂. ဝိတ်ပိုတွေချပါ။ တနေ့ကိုမိနစ်၃၀ပြေးပါကပုံပန်းပိုကောင်းလာတာတွေ့ရမှာပါ။အစမှာနာရီဝက်ပြေးဖို့ခက်ခဲနေရင်လမ်းလျှောက်ပါ။ပြေးခြင်းကလမ်းလျှောက်ခြင်းထက်ကယ်လိုရီနှစ်ဒသမငါးဆပိုလောင်ကျွမ်းပါတယ်။ တပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်၃ကြိမ်ခန့်နာရီဝက်လောက်ရေကူးပါ။သင်ကြိုက်တဲ့ပုံမျိုးရွေးပါ။ရေထဲကလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကသင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုကျစေလို့လှုပ်ရှားနေဖို့ကအဓိကပါပဲ။၁နာရီလောက်ပြင်းထန်စွာရေကူးခြင်းက၅၀၀ကယ်လိုရီလောက်လောင်ကွမ်းစေပါတယ်။ သင်အလေးချိန်လျော့ချင်ရင်တော့စက်ဘီးစီးခြင်းကအခြေခံပါပဲ။သက်တောင့်သက်သာပုံနဲ့တပတ်မှာ ၂ကြိမ်၃ကြိမ်လုပ်ပါ။ အဆင့် ၃. … Read more
ကျနော်ချစ်တဲ့ တပ်မတော်ကြီးကို ပြိုကွဲဖို့ မကြံစည်သင့်ဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ မင်းအုပ်စိုး
သူ႔ရဲ႕ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မွာေတာ့ ” ျမန္မာျပည္ေျမပုံ အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေထာက္ခံခ်င္ပါသလား ေထာက္ခံလို႔ ရပါတယ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္ခင္ခ်င္ပါသလား ခ်စ္ခင္လို႔ရပါတယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးကိုးကြယ္ခ်င္လြန္းတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ အ ေမ လို႔ေခၚခ်င္ပါသလား လြတ္လြတ္ လပ္လပ္အားရပါးရႀကီး အေမလို႔ေခၚလို႔ရပါတယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကို ေထာက္ခံခ်င္ပါ သလား ေထာက္ခံလို႔ရပါတယ္ ခ်စ္ခင္ခ်င္ပါသလား ခ်စ္ခင္လို႔ရပါတယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလြန္းတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ အဘလို႔ ေခၚခ်င္ပါသလား လြတ္ လပ္စြာ ေခၚလို႔ရပါတယ္ တပ္မေတာ္အတြင္းမွာ ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္းေနၾကတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြ ကို မုန္းခ်င္ပါသလား မုန္းလို႔ရပါတယ္ ဆဲခ်င္ပါသလား အိမ္ထဲ မွာ ေနၿပီးပါးစပ္ကေန အားပါးတရ ဆဲလို႔ရပါတယ္ ကုန္ကုန္ ေျပာရရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို မုန္းခ်င္ပါသလား မုန္းလို႔ရပါ တယ္ … Read more
ဆန်တွေ ဝယ်ထားတာ ကြာလာလို့ မည်းလာတာ ပိုးထိုးလာလျှင်
May 13, 2021 by Achawlaymyar
အိမ်တွေမှာ ဆန်တွေ ဝယ်ထားတာ ကြာလာလို့ မည်းလာတာ ပိုးထိုးတာ မဖြစ်ရအောင် အိမ်တွေမှာ ဆန်တွေ ဝယ်ထားတာ ကြာလာရင် ပိုးကောင်တွေ တက်တာ၊ ဆန်တွေ မည်းလာတာမျိုးတွေ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒီရန်တွေကနေ ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့ အချက်က ၅ ချက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူပါတယ်။ ၁။ ငရုတ်သီးခြောက် ထည့်ထားပါ လေလုံတဲ့ ဘုံးတွေထဲ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ငရုတ်သီး အနီခြောက် တချို့ကိုပါ ရောပြီး ထည့်ထားပေးပါ။ ငရုတ်သီးရဲ့ အနံ့ကို ပိုးမွှားတွေက မကြိုက်ပါဘူး။ ငရုတ်သီးလိုပဲ ငရုတ်ကောင်းစေ့ (သို့) လေးညှင်းပွင့်လေးတွေ ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ ၂။ နေရောင်ခံပေးပါ သင့်ဆန်တွေမှာ အဖြူ ဒါမှမဟုတ် အနက်ရောင် ပိုးလေးတွေ အများကြီး တက်နေပြီဆိုရင်တော့ နေရောင်ထဲမှာ … Read more
ပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်‌တွေပြန်လုပ်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ အလှူအတန်းတွေ ပြန်လုပ်ချင်နေပြီလို့ ဆိုလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး..
အာဏာသိမ်းကာလက စပြီး အလုပ်တွေနားလိုက်ရပြီး ၊ အလှူအတန်းတစ်ချိူ့ ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ၊ ပရိတ်သတ်နှင့်အတူ တစ်သားတည်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက် လူအများရဲ့ ဝေဖန်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ အလှူတန်းများ ပြုလုပ်သည့် ဖြူဖြူထွေးကို ပရိတ်သတ်များက အားကိုတစ်ကြီး CRPH အတွက် အလှူငွေ ထည့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ ၊ Visa ကဒ်Myday မှာ တင်ပြပြီး တကယ်လှူလား မလှူလားဆိုတာတောင် မသိခဲ့ရသည့်အတွက် ဝေဖန်မှုမှာများလာပြီး ၊နောက်ပိုင်း facebook ကနေပါ ဘာမမတင်တော့အောင် ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်းတွင်းမှာ ဖြူဖြူထွေးဟာ “အလှူအတန်းတွေအရင်လိုပြန်လုပ်ပြီး ၊ ပရိတ်သတ်နဲ့အတူ တစ်သားတည်းနေထိုင်သွားချင်ကြောင်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။ Social Punishment ပြုလုပ်ခံရသည်အနှပညာရှင်များတစ်ချိူ့ဟာ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထူးထူးခြားခြားပြန်ပေါ်လာပြီး၊ ပရိတ်သတ်တွေ ကြားမှာ ပြန်ပြီး နေရာရယူဖို့ ကြိုးစားနေကြဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ Crd Unicode version အလုပ်တွေ … Read more
သူရယ် ကျွန်မရယ် အေးစက်မှုတွေရယ်
သူရယ် ကျွန်မရယ် အေးစက်မှုတွေရယ် သူနဲ့ကျွန်မကြားမှာ အရင်က နွေးထွေးမှုလေးပဲရှိခဲ့တာပါ … ကိုယ်မရီနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေဆို သူက ရီအောင်အမြဲစပြီး ဟာသတွေပြောခဲ့ဖူးတယ်လေ … သူ အဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တော့ သူ့အလိုကျ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြီးတော့ ကျွန်မ အလိုက်သိပေးခဲ့တယ် စကားတွေ ပြောစရာမရှိရင်တောင် တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ငေးရင်း ကျွန်မတို့ အချိန်တွေ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ဖူးတယ် အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာတော့ ကျွန်မ အချစ်ကံကောင်းတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်ခဲ့ဖူးတဲ့အထိကို ပျော်ရွှင်ခဲ့ရဖူးပါတယ် ပျော်စေခဲ့တာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်သလို အနားမှာရှိပေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ခုလောလောဆယ်တော့ ကိုယ့်အနားကျန်ခဲ့တာဆိုလို့အေးစက်မှုလေးတွေရယ် အထီးကျန်မှုလေးတွေရယ် မျက်ရည်တွေပဲ ကျန်နေခဲ့တော့တယ် သူ အရင်လို ကျွန်မအနားမရှိတော့ဘူး ပြောစရာတွေရှိလာရင်တောင် ကျွန်မခေါ်နေကျ သူ့ဖုန်းလေးတွေ မအားတော့ဘူးလေ .. ကျွန်မ လွမ်းနေတဲ့အခါ အရင်ကလို လွမ်းတိုင်းပြေးတွေ့မယ်ဆိုတဲ့သူက ကိုယ်မျှော်နေမလားလို့မတွေးတတ်တော့ဘူး အမှတ်မရတော့ဘူးထင်ပါတယ် … Read more
13.5.2021 မှ 19.5.2021 အထိ ဟောစာတမ်း
13.5.2021 မှ 19.5.2021 အထိ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ မိမိလုပ်ကိုင်သော အလုပ်များအတွက် ငွေကြေးအမြောက်မြားစွာ ရရှိဖို့ကြုံပေမယ့်.လက်ထဲငွေသားရောက် ဖို့ ကြန့်ကြာနေလိမ့်မယ်။ မိမိထက်နိမ့်သူတို့နှင့် လက်တွဲပြီးအလုပ်များ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရတတ်သည်။ ကုန်သည် များအရောင်းအဝယ် ဖြစ်ရုံသာဖြစ်ရတတ်သည်။ အရောင်းအဝယ် ကိစ္စမှ အကျိုးအမြတ် ထူးထူးခြားခြားမျှော်လင့် လို့မရနိုင်သေးပါ။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားသမားများလိုချင်ဇော၊ ရချင်ဇောနှင့် ဆုံးဖြတ်မိပါက အမှားအယွင်းပင် ဖြစ်တတ်ပါ သည်။ လက်လီစီးပွားများထင်သလောက် အဆင်မပြေဖြစ်ရတတ်ပါသည်။ မိမိအသုံး ပြု ထားသော ငွေကြေးများ ပြန်မရဘဲ ဖြစ်ရတတ်ပါသည်။ အရာရာကို သတိဖြင့် ချိန်ချိန်ဆဆ ဆောင်ရွက်လုပ် ကိုင်ပါ။ မှားယွင်းဆုံးဖြ တ်မိခြင်း မျိုးကြုံရတတ်ပြီး ဆုံးရှုံးနစ်နာရတတ်သဖြင့် စိတ်ကို တည်ငြိမ်စွားထားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ပါ။ကျန်းမာရေး အားနည်းယုတ်လျော့နေတတ်ပါတယ်။ တက်စာတွေစားမိရာက ရောဂါတိုးလာ တတ်ပါတယ်။ဒူးအောက်ပိုင်း … Read more
← Previous Page1 … Page44 Page45 Page46 … Page79 Next →